Umda weNdlu yeHolide yase-Innes - I-Airbnb
Umda weNdlu yeHolide yase-Innes
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBrian
Le ndlu ibekwe kumda we "Innes National Park" kwi-York Peninsula. Likhaya elinamagumbi amabini okulala elilungele isibini esinye okanye usapho oluncinci. Ubuninzi babantu abadala abangama-x4 (izibini ezi-2) okanye usapho olunabantu abadala x2 kunye nabantwana.
Ilinen AWUXHAKISWA, uya kufuna amashiti, iitawuli, itawuli yeti, imathi yokuhlambela.
(imiqamelo, iingubo kunye neengubo zilapha endlini)
*Qaphela-imbuyekezo iya kubonelelwa ngobusuku obungakwaziyo ukuhlala ngexesha lokuvalwa kwe-Australia ngenxa ye-Covid. (SA Kuphela)
Indlu inesicwangciso esivulekileyo sokuhlala enamagumbi amabini okulala, ibhedi ye-Queen kwibhedi enkulu kunye nebhedi enkulu kwigumbi elisecaleni elineebhotile kunye noomatrasi omnye phezulu.
Amagumbi okuhlala ngesikhumba anendawo yomlilo & nenkqubo yokwahlulahlula umoya yomoya, indawo yokutyela, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iTV yeLCD, iDVD & neshedi yangaphandle enetafile yentenetya kunye nebhodi yedart. Kukho i-BBQ kunye nezitulo zangaphandle ukonwabela ukusetwa kwendalo.
"Edge of Innes" ibekwe kwindawo yokugcina kufutshane nePaki yeSizwe. Indlu ikwindawo entle yokuhlala ezolileyo eMarion Bay. Unokuhamba ngehlathi ukusuka kumnyango wakho ongasemva ukuya kwipaki yesizwe okanye ubeke abantu abaqubhayo kwaye ubethe elunxwemeni.
Ndiyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo nge-imeyile kunye nefowuni ephathwayo. Umkhathaleli wethu uhlala kanye kufutshane nepropathi kwaye angakunceda ngeemfuno zakho.